Ikhabhinethi yethu yeBell yindlu yestudiyo etofotofo kwaye iyindawo egqibeleleyo yokubaleka. Ihlala kanye ecaleni kwekhabhathi yethu yeNkululeko kwaye iphantse yafana ngendlela efanayo. Ingena ngokukhululekileyo abantu aba-3 (Ibhedi yeBunk, egcwele emazantsi kwaye ayingatshatanga phezulu) kwaye yimizuzu kude nomlambo. Ibekwe kwindawo yabucala ecaleni komnini. Inegumbi layo lokuhlambela elineshawa, hamba kwigunjana, itafile kunye nezitulo kunye nekhitshi elincinci. Kananjalo unomatshini wekofu we-kuerig.
Ikhabhathi yethu ethandekayo ineveranda yangaphambili elungele ukuphumla! Kukwakho nendawo yokuhlala phakathi kwekhabhathi ezi-2 zokuhlala, uphumle kwaye ube nekomityi yekofu.
Kukho ivenkile entsha yokutya, isikhululo esitsha segesi, idola entsha ngokubanzi kunye neendawo zokutyela ezi-5 ezintle. I-Diversion Canal yimayile kuphela ezantsi kwendlela kwaye inedokhi yesikhephe. Ezinye iindawo ezintle zokutya kanye kulo mjelo / uMlambo. Kukwakho neChibi iMaurepas esezantsi kwendlela ukuya kude.
Siyakuthanda ukunxibelelana neendwendwe zethu. Ukuba iindwendwe zethu zinemibuzo malunga nekhabhinethi okanye ipropati, siyavuya ukuphendula ngokubhaliweyo okanye ukufowuna.